Tag: ndị mmepe ngwa ekwentị | Martech Zone
Tag: ndị mmepe ngwa ekwentị
Tọzdee, Ọktoba 18, 2012 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ị bụ onye nrụpụta ngwa mkpanaka ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị nwere ọtụtụ ngwa mkpanaka, nchịkọta ọdịnala anaghị ebipụ ya. Omume ibudata, omume ụlọ ahịa na omume ojiji bụ data dị mkpa nwere ike inyere gị aka ịbawanye ahịa ma ọ bụ nbudata, yana mmekọrịta onye ọrụ. Ndị mmadụ abịala na-atụ anya ahụmịhe dị iche mgbe ha na-emekọrịta ihe na ngwaọrụ mkpanaaka… na nchịkọta ga-enyere gị aka ịchọpụta ohere ndị ahụ. Countly bu onye nyocha nyocha no na ya
Echere m mgbe niile na ngwa ihe nchọgharị ekwentị ga - agabiga ngwa ngwa - dị ka ngwa SaaS ejirila ngwanrọ desktọọpụ. Agbanyeghị, na nsogbu nzuzo, geolocation, swiping na ikike mkpanaka ndị ọzọ… ọ dị ka ngwa mkpanaka dị ebe a ịnọ. Ihe omuma a sitere na ulo akwukwo.com na-ekwuputa ihe ochicho na usoro ndi otu gi nwere ike ime ka ha buru ndi mmepe ngwa. Gartner na-ebu amụma na site na mmemme mmepe ngwa ngwa 2015 ga-akarị ngwa ngwa PC site na 4